मधुपर्क जेठ, २०६९ गन्तव्य - तेजप्रकाश श्रेष्ठ साँझ झर्नै लागेको थियो । पश्चिमतिर सेलाउँदो सूर्यको लालिमा पोतिदै थियो । चराहरू चिर्बिराउदै आˆना गुँडतर्फ हान्निदै थिए । गाईवस्तु फाट्टफुट्ट गोठतर्फ लम्किँदै थिए । मानवहीन वस्तीझैँ झ्याउँकीरी कराइरहेका थिए ।
म एउटा जीर्ण छाप्रो अगाडि पुगेर टक्क रोखिएँ । यताउता हेरेँ । कतै मानव चालचुल थिएन । वातावरण शान्त थिए । छाप्रो पनि सुनसान थियो । पहेँलिएको घामले छाप्रो अझैं उराठलाग्दो देखिन्थ्यो । गोठ खाली थियो । न दाम्लो थियो, न त गाईवस्तु Û न गोबर थियो, न त गोबरगहुँतको गन्ध ! मानवहीनझैँं लाग्ने घरआँगनले मलाई खाउँलाझैँ मुख बाइरहेको थियो ।
म अल्मलिएँ-यही घरआँगन हो त मेरो अहिलेको गन्तव्य ?
'आमा Û आमा Û' बोलाएँ हतास Û फेरि बोलाएँ । चाइँचुइँ भएन घर बाहिर-भित्र कतै Ûमन ढक्क फुल्यो । अत्यासले सतायो । हातको कुम्लो आँगनमै फ्यात्त मिल्काएर हुरिँदै पिँढीमा उक्लिएँ ।
'आमा Û आमा Û' ढोका ढक्ढकाएँ । भित्र कुनै चाइँचुइँ थिएन । ढोकामा ताल्चा पनि लगाइएको थिएन । ढोका ठेलेँ सुस्तरी Û घरक्क खापा खुल्यो । भित्र अँधेरो थियो । केही देख्न सकिँदैनथ्यो ।
केही बेर आँखा मिच्दै अँध्यारोलाई पछ्यारहेँ । अन्धकारमय जीवन आँखामा सल्बलाउन थाल्यो । आतङ्कवादी अन्धकारमा चुर्लम्म डुबेझैँ थियो वातावरण Û आतङ्कवादी धङ्धङी अझैँ हटिसकेझैँ लागेन । त्रसित देखिन्थ्यो गाउँवस्ती Û
म बाटोमा हिँड्दा पनि त्रसित गाउँवस्तीका आँखाहरू Û नौलो व्यक्तिको आगमनमा शङ्कालु र त्रसित आँखा र मनमस्तिष्कहरू अझै सल्बलाएका देखिन्थे । विद्रोही मानिने समूह नै अचेल सत्तामा पुगिसकेको अवस्थामा पनि किन गाउँवस्ती यति त्रसित र आतङ्कित छन् म बुझिरहेको थिइनँ ।
भन्न त भन्थे साथीहरू 'आतङ्कित परिवेश अझैँ सेलाएको छैन गाउँवस्तीमा Û गाउँवस्तीमा मात्रै हैन सहरबजारमा पनि �